'Rome of Britain' ayaa laga yaabaa inay lumiso Xaaladda Dhaxalka Adduunka ee UNESCO
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » 'Rome of Britain' ayaa laga yaabaa inay lumiso Xaaladda Dhaxalka Adduunka ee UNESCO
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Soojiidashada dalxiiska ee ugu weyn oo kaliya 66.5 mayl (107 km) koonfur -bari London, Canterbury waxay halis ugu jirtaa inay lumiso quruxdeeda iyo taariikhdeeda iyada oo u oggolaanaysa tiro sii kordheysa oo ah horumaro fool -xun oo ka weyn gudaha, ama ku dhow, xuddunta taariikhiga ah ee magaalada, oo weli ku dhex jirta wareegga derbiyada dhexe.
Canterbury waxay wajahaysaa halista ah in la burburiyo, ayay tiri kooxda hidaha.
UNESCO ayaa laga yaabaa inay xayuubiso heerka Canterbury ee Goobta Dhaxalka Adduunka.
Dalxiiska ayaa u qalma ku dhawaad ​​$ 700 milyan sanadkii dhaqaalaha Canterbury.
SAVE British Heritage, oo ka mid ah kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee UK, ayaa maanta soo saartay warbixin ay kaga digayso in magaalada UNTERCO ee dhaxalka adduunka ee Canterbury ay wajahayso halis ah in si taxaddar la'aan ah loo burburiyo.
Soojiidashada weyn ee dalxiiska oo kaliya 66.5 mayl (107 km) koonfur -bari London, Canterbury waxay halis ugu jirtaa inay lumiso quruxdeeda iyo taariikhdeeda iyada oo u oggolaanaysa tiro sii kordheysa oo horumar fool -xun oo baaxad leh gudaheeda, ama ku -xigta, xuddunta taariikhiga ah ee magaalada, oo weli ku xardhan wareegyada derbiyada dhexe, ayay kooxda dhaxalka ku sheegtay warbixin.
Gobolka Canterbury wuxuu ku dhow yahay xaalad degdeg ah oo qaran, ayay raacisay.
Magaalada ayaa raaci karta Liverpool oo dhawaan laga xayuubiyay UNESCO Xaaladda Goobta Dhaxalka Adduunka, Ptolemy Dean, oo ah madaxweynaha Ururka Canterbury, ayaa sidoo kale ka digay.
Bandhigii ugu dambeeyay ee la heli karo ayaa muujinaya dalxiiska wuxuu ku kacayaa ku dhawaad ​​700 milyan oo doolarka Mareykanka sanadkii dhaqaalaha Canterbury. Magaaladu waxay soo jiidatay ku dhawaad ​​65 milyan oo dalxiisayaal ah sanad ka hor masiibada COVID-19.
Canterbury waxay caan ku tahay cathedralkeeda cajiibka ah, hoygii awoowayaasha ee Kaniisadda England, oo la aasaasay sanadkii 597 Miilaadiga, iyada oo dhismaha hadda jira laga soo bilaabo 1070.